Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 16:1-31
Mufananidzo wemutariri asina kururama (1-13)
“Munhu akatendeka pazvinhu zvidiki akatendekawo pazvinhu zvikuru” (10)
Mutemo uye Umambo hwaMwari (14-18)
Mufananidzo wemupfumi naRazaro (19-31)
16 Akabva atiwo kuvadzidzi vake: “Mumwe mupfumi aiva nemutariri* aipomerwa kuti aipambadza zvinhu zvake. 2 Saka akamushevedza, akati kwaari, ‘Ko ndezvipi izvi zvandiri kunzwa kuti uri kuita? Ndipe kuno zvawakanyora zvinoratidza mafambisiro awanga uchiita basa rako reutariri, nekuti handichadi kuti urambe uri mutariri wemba yangu.’ 3 Mutariri wacho akabva ati nechemumwoyo, ‘Ndoita sei tenzi wangu zvaava kundibvisa pautariri hwangu? Handina simba rekurima, uye ndinonyara kupemha. 4 Yaa! ndaziva zvandichaita, kuti kana ndabviswa pautariri vanhu vandigamuchire mudzimba dzavo.’ 5 Akabva atanga kushevedza munhu mumwe nemumwe aiva nechikwereti natenzi wake, akati kune wekutanga, ‘Une chikwereti chakakura sei natenzi wangu?’ 6 Akapindura kuti, ‘Zviyero 100 zvemafuta* emaorivhi.’ Iye akati kwaari, ‘Tora chibvumirano chako ichi ugare pasi, wobva wanyora 50.’ 7 Akabva ati kune mumwe, ‘Ko iwe, chikwereti chako chakakura sei?’ Akati, ‘Zviyero zvikuru 100 zvegorosi.’* Iye akati kwaari, ‘Tora chibvumirano chako ichi, unyore 80.’ 8 Tenzi wemutariri wacho akamurumbidza, kunyange zvazvo akanga asina kururama, nekuti akaratidza uchenjeri;* nekuti vanakomana venyika ino vanoita zvinhu neuchenjeri kuchizvarwa chavo kupfuura vanakomana vechiedza.+ 9 “Uyewo ndinoti kwamuri: Zviitirei shamwari nepfuma isina kururama,+ kuti kana iyoyo yapera, vakugamuchirei munzvimbo dzekugara dzisingaperi.+ 10 Munhu akatendeka pazvinhu zvidiki akatendekawo pazvinhu zvikuru, uye munhu asina kururama pazvinhu zvidiki haanawo kururama pazvinhu zvikuru. 11 Saka kana musina kuratidza kuti makatendeka nepfuma isina kururama, ndiani achaisa mumaoko enyu pfuma yechokwadi? 12 Uye kana musina kuratidza kuti makatendeka pazvinhu zvemumwe munhu, ndiani achakupaiwo zvenyu pachenyu?+ 13 Hapana muranda angashandira vanatenzi vaviri, nekuti anogona kuvenga mumwe, oda mumwe wacho, kana kuti acharamba achida mumwe, ozvidza mumwe wacho. Hamugoni kuva varanda vaMwari nevePfuma.”+ 14 VaFarisi, avo vaida mari, vakanga vakateerera zvese izvi, uye vakatanga kumufinyamira.+ 15 Saka akati kwavari: “Ndimi munozviti makarurama pamberi pevanhu,+ asi Mwari anoziva mwoyo yenyu.+ Nekuti chinhu chinonzi chinorumbidzwa pakati pevanhu chinosemesa pamberi paMwari.+ 16 “Mutemo neVaprofita zvakagumira pana Johani. Kubvira ipapo, Umambo hwaMwari huri kuziviswa semashoko akanaka, uye vanhu vemarudzi ese vari kuhuvavarira.+ 17 Chokwadi, zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure pane kuti kachikamu kamwe chete kebhii reMutemo karege kuzadziswa.+ 18 “Munhu wese anoramba mudzimai wake, oroora mumwe, anoita upombwe, uye wese anoroora mudzimai akarambwa nemurume wake, anoita upombwe.+ 19 “Paiva nemumwe murume akanga akapfuma aipfeka nguo dzepepuru dzemachira anodhura, achinakidzwa neupenyu hweumbozha mazuva ese. 20 Asi paiva nemumwe mupemhi ainzi Razaro aiva nemaronda muviri wese aigara achiiswa pagedhi rake 21 achitoshuva kudya zvinhu zvaidonha patafura yemupfumi. Kunyange imbwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. 22 Nekufamba kwenguva mupemhi uya akazofa, akaendeswa nengirozi padivi paAbrahamu.* “Mupfumi wacho akafawo, akavigwa. 23 Uye ari muGuva* akasimudza maziso ake, achirwadziwa, uye akaona Abrahamu nechekure uye Razaro ari padivi pake.* 24 Saka akashevedzera achiti, ‘Baba Abrahamu, ndinzwireiwo tsitsi, mutume Razaro kuti anyike munwe wake mumvura, anditonhodze rurimi, nekuti ndiri kuyaura mumoto muno mandiri.’ 25 Asi Abrahamu akati, ‘Mwana, yeuka kuti iwewe wakawana zvinhu zvakanaka muupenyu hwako hwese, asi Razaro akawana zvinhu zvakaipa. Iye zvino ava kunyaradzwa kuno, asi iwe uri kurwadziwa. 26 Uye pasinei nezvese izvi, pakati pedu nemi pane mukaha wakakura uripo, zvekuti vaya vanoda kuyambuka vachiuya ikoko havakwanisi, uye vanobva ikoko havakwanisiwo kuuya kuno.’ 27 Iye akabva ati, ‘Kana zvakadaro, ndinokukumbirai baba, kuti mumutume kuimba yababa vangu, 28 nekuti ndine vanin’ina vashanu, kuti aende anonyatsovapupurira, kuti naivowo vasazouya munzvimbo ino yekurwadziwa.’ 29 Asi Abrahamu akati, ‘Vane zvakanyorwa naMozisi neVaprofita, saka ngavateerere izvozvo.’+ 30 Iye akabva ati, ‘Aiwa kani, baba Abrahamu, kana mumwe munhu anobva kuvakafa akaenda kwavari ivo vanopfidza zvivi zvavo.’ 31 Asi iye akati kwaari, ‘Kana vasingateereri zvakanyorwa naMozisi+ neVaprofita, havangabvumiwo kana mumwe munhu akamuka kuvakafa.’”
^ Kana kuti “nemukuru wevashandi vemumba.”
^ Kana kuti “Mabhati 100 emafuta.” Bhati rakanga rakaenzana nemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “Makori 100 egorosi.” Kori uwandu hunozadza mudziyo wemarita 220. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “uchenjeri hunobatsira; ungwaru.”
^ ChiGir., “pachipfuva chaAbrahamu.”
^ Kana kuti “muHadhesi.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ ChiGir., “pachipfuva chake.”